I-Panty kunye neBra
Idolo eliphakamileyo leSokisi
I-Yoga / Pilates Sock
Imidlalo yeFashoni yeSock
Umntwana kunye naBantwana abaSokisi
Amadoda azikhetha njani iikawusi wear
Abanye abantu bathi iikawusi lulusu lwesibini lomntu. Ukunxiba iikawusi ekunene kwimeko elungileyo sisayensi. Umgaqo obaluleke kakhulu emadodeni ukunxiba iikawusi kukugxininisa kumdlalo uphela. Kwiimeko ezininzi, iibhulukhwe ezinde ziya kugubungela ngokuthe ngqo umphezulu. Kuphela ungaqondanga ...
Ndifundisa indlela yokunxiba iikawusi zamadoda
Ukunxiba iikawusi ekunene kwimeko elungileyo sisayensi. namhlanje, Ndifundisa indlela yokunxiba iikawusi zamadoda 1. Umbala weekawusi zamadoda kufuneka ube ngumbala ongathathi cala osisiseko kwaye ube mnyama kunombala webhlukhwe. Umbala weekawusi zamadoda yeyona ndlela inemfashini kwaye ilula ...
Izibonelelo zokunxiba impahla yangaphantsi kwezemidlalo
ngomphathi ku 20-12-14
Ukuba awuzinxibi iimpahla zangaphantsi zemidlalo xa uzilolonga, oko kuya kubangela ingozi enkulu kumabele amabhinqa angabafazi. Xa abafazi bezilolonga, ukunxiba iimpahla zangaphantsi kwezemidlalo kunezibonelelo ezininzi, ezinokuthintela isifuba ekuthinteleni umthambo. 1. Ukufunxa umothuko kuthintela ukugoba che ...
Iikawusi ezinxitywa ziimbaleki zobungcali
Njengomdlalo wesizwe, ukubaleka kulula ukuqalisa, akufuneki zixhobo kwaye akuphelelanga kwindawo leyo. Kuqikelelwa ukuba abantu abali-9 kwabali-10 abaphulukana nobunzima baqala ngokusebenza. Kodwa kuqikelelwa ukuba bambalwa abantu abazi malunga nokubaleka iikawusi ngaphandle kweembaleki. Ukunyuka kwamatye ...
Uhlobo oluphambili lweesokisi zemidlalo
Xa usenza imidlalo eyahlukeneyo, nxiba izihlangu ezahlukeneyo zemidlalo. Ngokufanayo, iisokisi kufuneka zifaniswe. Ukunxiba iikawusi zemidlalo ezifanelekileyo ngexesha lokuzilolonga kuya kunciphisa ukonzakala kwezemidlalo. Ezi zilandelayo ikakhulu zazisa iikawusi zemidlalo ezidumileyo: 1.1 Iikawusi zeYoga Ukuzivocavoca umzimba kukuziqhelanisa noku ...
Umahluko phakathi kwempahla yangaphantsi kwezemidlalo kunye neempahla zangaphantsi eziqhelekileyo
Ukusuka kwimbonakalo yelaphu: iimpahla zangaphantsi eziqhelekileyo ubukhulu becala ngumqhaphu, ifayibha yelinen, njl., Kwaye okuninzi kuya kuba neeleyisi, ezilungele kwaye zihle. Amalaphu ezambatho zangaphantsi ezemidlalo ikakhulu iyinylon epheleleyo, ipholiyesta-spandex, ipholiyesta nenayiloni, njl Ilaphu lilungile ...
Umahluko phakathi kweekawusi zezemidlalo kunye neekawusi eziqhelekileyo
Into endabelana ngayo nawe namhlanje ngumahluko phakathi kweekawusi zezemidlalo kunye neekawusi eziqhelekileyo. Xa u-Ubuy ethetha ngesihloko sanamhlanje, ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi baya kuba namathandabuzo. Iikawusi zihlala zinxitywa kakuhle, kutheni kufanele ndikhethe iikawusi zemidlalo xa ndenza umthambo? Ngaba zonke iisokisi? Uthini umahluko? ...
Ezinye iingcebiso zamadoda zokukhetha iikawusi zamadoda
Abanye abantu bathi iikawusi lulusu lwesibini lomntu. Ukunxiba iikawusi ekunene kwimeko elungileyo sisayensi. Umgaqo obaluleke kakhulu emadodeni ukunxiba iikawusi kukugxininisa umdlalo uphela. Kwiimeko ezininzi, iibhulukhwe ezinde ziya kugubungela ngokuthe ngqo umphezulu. Qha ngokungafanelekanga ...
Ekwindla kuyeza！ Ungazikhetha njani izitokhwe ezikumgangatho ophezulu
Ekwindla kuyasondela, kwaye lixesha lesitokhwe. Abafazi abathanda ubuhle bazikhetha njani iikawusi ezisemgangathweni ophezulu? Ubuy ukuxelela ukuba kulula ukuqonda ezi zinto zintathu kwaye ukhethe isibini yeesokisi ezinemfashini kunye nezikumgangatho ophezulu! 1. Jonga umgangatho wembonakalo yesokisi ...
Uhlalutyo lobume bophuhliso lweemarike zeshishini lase China e2020
ngomphathi ku 20-07-27
I-China iye yaba lilizwe eliphambili lokuvelisa iikawusi ngokuthunyelwa kwelinye ilizwe ngaphezulu kweebhiliyoni ezili-16 ngababini Ishishini lokuvelisa iikawusi livela eYurophu naseMelika, njengamanye amashishini. Kunye nzulu lwehlabathi kwezoqoqosho, intsingiselo yokwahlulwa ngamazwe yezabasebenzi kwi s ...
Ungayikhetha njani impahla yangaphantsi kwezemidlalo？
ngomphathi ku 20-06-08
1. Khetha ilaphu elilungileyo Izambatho zangaphantsi zemidlalo ezinokukhanya, kulula ukuba zihlanjwe, zinxitywe, kwaye zingena mbilo, ifayibha yepolyester kunye neelayoni ziyacetyiswa. Banokuhlangabezana nale migangatho ingentla kwaye bakwenze ukhululeke ngakumbi xa usenza umthambo. 2. Khetha isitayile ngokwendebe ekwimfuza ...
Ngaba ukhe weva ngeSokisi ezonwabileyo? Kunyaka ophelileyo ithengise iikawusi ngezigidi ezili-100 zeerandi
Mhlawumbi abanye abantu abaqhelananga neeSokisi ezonwabileyo. I-brand yasekwa eSweden ngo-2008, ngokupheleleyo ingcamango suden evela Mikael Söderlindh kunye Viktor Tell. Bafumanise ukuba ezinye zeekawusi eziqaqambileyo nezishicilelweyo kwintengiso (uninzi lwazo lushicilelwe ngentloko kaSimpson) ziphantse za ...
Ku-Ubuy awuyi kufumana kuphela iikawusi kunye nempahla yangaphantsi engenamthungo oyifunayo, kodwa kunye neqabane elinobuhlobo kwishishini, elishishina ngokulula nelinye. Sithembele kwinkonzo elungileyo kwaye injongo yethu kukuba nentembeko kubudlelwane beshishini olusekwe kwinkonzo elungileyo kunye nomgangatho ophezulu.
Igumbi617 ， Ibhlokhi yeTongrenjinghua NO.616 Gudun Road, Hangzhou Zhejiang China